9 ka mid ah Beeralayda ugu Fiican ee Koonfur Bari Asia
Weligaa Waligaa Ka Hel Hoosooyinka Ku Fiican ee Koonfur Bari Aasiya
Qaar ka mid ah jilibka ugu wanaagsan ee aad cabi kartid si aad u garaacdo kulaylka Aasiya Aasiya
Koonfurta bari Aasiya waxay ahayd bakhaarro waaweyn oo khamri ah, iyo deegaanadu waxay ahaayeen daraasado deg deg ah: laga soo bilaabo San Miguel Beer 1890 ilaa Tiger Beer 1930-kii si aad u liitay Indochina beero ah 1960-meeyadii, gobolka hadda waxa ku yaala liis adag oo ah jinsiga loo sameeyey kulaylka kulaylaha.
Cabitaannada halkan lagu soo bandhigay waxaa badanaa loo yaqaan 'pilsners' oo loogu talagalay inay hoos u dhacaan; ka dib maalin dhan roaming, waxaad tidhaahdaan, Hue ee xabaalaha boqortooyada ama socdaalka volcanoes ee Indonesia , waxaad u mahadcelin doonaa mid qabow mid ka mid liiska hoos ku qoran.
(Sharciga cabitaanka ayaa ku kala duwan sida dalka - ka hor inta aanad ku dhicin gobolka, ka hubi tusahan gaaban ee sigaar cabidda ee koonfurta bari Aasiya .)
Caanaha cusub ee Angkor Beer ee Banteay Chhmar, Cambodia. Mike Aquino
Angkor Beer waa bambada caadiga ah ee Cambodia - abid abid, aad loo heli karo, iyo waligeed la soo dhaweyn karo marka qabow iyo marka la eego uun ka dib maalin dhan sahaminta dhismooyinka macbadka Angkor .
Dareemka beerta ayaa ah mid aad u hooseeya oo muuqaal ah oo joogtada ah, laakiin waxay ku xiran tahay cabbitaanka khamriga ee qiyaas ahaan 5.5%.
Angkor waxaa laga sameeyay Cambodia tan iyo 1960-meeyadii, iyo dukaamo kasta oo makhaayad, makhaayad, iyo baro qoob-ka-shaqeyn ayaa u adeega walxaha tiro badan. Cambodians waa cabitaanno aad u fiican - waxaa jira sawirro laga duubo Cambodia oo muujinaya sakhradaha u jiifa sarkaalkooda hurdo beereedkooda bariis - iyo Angkor, waxay leeyihiin baro si ay u dhigaan harraadkooda.
Wadankii Asaliga: Cambodia
Khamriga mugga: 5.5%
Time Magazine wuxuu ugu yeeray "Biirka ugu wanaagsan Asia"; Bangkok Post ayaa ku magacawday 'Dom Perignon of beers Asian'. Maaha mid u xun barkada diyaargarawga ah mid ka mid ah wadamada ugu yar ee laga soo bilaabo Koonfur Aasiya .
Beerlao ayaa markii ugu horreysay dhalatay 1973 - afar iyo toban sano kadibna wadaagis la leh Carlsberg kaddib, biiradani waa kuwa ugu caansan beelaha soo jiidashada leh ee dhirta iyo dhadhanka nadiifka ah.
Shirkadda ayaa sheegaysa in kaliya maaddooyinka ugu wanaagsan ay galaan beerkooda - meelo jarmal ah iyo qalalan macaan, Faransiis Faransiis, iyo bariis dabacsan. Dhaqdhaqaaqa oo gabi ahaanba iska aamusay markii uu qabay qabow, Beerlao waxay u muuqataa in ay dhexdhexaadinayso ambabixinta dhabta ah ee Luang Prabang.
Waddanka Asalkiisa: Laos
Khamriga mugga: 5%
Ku dhowaad magaalad weyn oo kuyaal wiyisha ah waxay leedahay hudheel u gaar ah. Hue , beerta "rasmiga ah" waa Huda, oo la wadaagto Carlsberg. Huda waa nalka qafiifka ah, ciriiriga oo leh madax yar iyo sanka xajka ah.
Sida dhammaan beero vietnam, Huda waxaa loo adeegaa qabow, badanaaba barafka - qaboojiye gudaha ah oo loogu talagalay cimilada qoyaanka Central Vietnam. Buugani wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay Hue's laakin, caatada gobolka ee dufan leh; Hagahaagu wuxuu lahaa kuwan kuwan oo leh duubo geedka-qoyan oo ku yaal makhaayadda Ang Tao, waxayna ahayd ciyaar lagu sameeyey jannada.
Waddanka Asalkiisa: Vietnam (oo la sameeyey oo inta badan loo adeegsaday Vietnam)
Qamriga cabbirka: 4.7%
Bogga rasmiga ah: Huda Beer on Facebook
ume-y / Flickr / Creative Commons
Bia Saigon, wax soo saarka shirkadda Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation, ayaa la soo saaray (oo badanaaba ah) in Ho Chi Minh City, South Vietnam - ha samayn khaladaadka (sida hagahaagu) weydiinay meel kale oo Vietnam ah!
Biaigga dahabka ah oo leh calaamado bariis ah iyo khudradda la kariyey, Bia Saigon waa in ay leedahay marka la cabo asxaabta Pham Ngu Lao . Waxay ka dhigeysaa aragti aad u yar, haddii ay dhan tahay: cabitaanka qabow (baraf, sida Vietnamese oo kale ah) waxay u oggolaaneysaa in uu dabeecaddiisa dareemo dareemid keliya.
Dalka Asalka: Vietnam (oo badanaa laga sameeyay koonfurta)
Khamriga mugga: 4.3%
Crisco 1492 / Wikimedia Commons
Bir Bintang waxay ku sarreysaa Suuqa Beeraha Indonesia , taas oo ah mid aad u ballaadhan; Indoonisiisku aad ayay u weyn yihiin beerta inkastoo ay dhaqan ahaan u yihiin dal Islaami ah.
Bintang waxaa lagu soo saaraa wadashaqeyn Heineken ah, sidaas darteed dhadhanka dhadhanka ah ee dhadhanka u eg wuxuu ka yimaadaa isla qoys: caraf macaan oo leh xasaasiyado, malab, liinta, iyo malt. Biirka waa midab dahabi ah, mid fudud, mid aad u macaan, oo aad u caratey: waxay hoos ugu dhacdaa kulaylka kuleylka.
Dalka Asalkiisa: Indonesia
Khamriga by Volume: 4.7%
sawirada midinchpunch / Getty Images
Inkasta oo uu mid ka mid ah jilayaasha jaban ee Thailand, Chang ayaa weli ah khibrad beer wanaagsan leh: dareere badan oo caan ah oo leh macaan yar, macaan dhadhan leh oo leh talooyin miraha iyo dalagyada.
Marka ugu horeysa ee qaboobo, Chang Beer waa cayaar aad u fiican oo loogu talagalay dariiqooyinka Thai Thai. Wixii dheeraad ah ee ku saabsan Thai iyo diyaaradaha kale ee Thai, akhriya liiska our top beers in Thailand .
Dalka Asalka: Thailand
Khamriga mugga: 6.4%
Barafka qaboobaha ee Dagon qaboojiyaha beerta ee Yangon, Myanmar. Mike Aquino
Inkastoo Myanmar ay leedahay liis ay ka mid yihiin beeraha maxaliga ah, Dagon Beer ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah tartamayaasha xooggan: waa iftiin, macaan iyo hambalyo, oo leh xoogaa macquul ah iyo dabacsan.
Dagon wuxuu ku jiri karaa gasacadaha iyo dhalooyinka, laakiin (dabiiciga) qoraalka qabyada ah wuxuu bixiyaa waayo-aragnimada ugu fiican ee badan, sida doorbididda daloolka daadinta taariikhiga ah sida bararka dheer ee Strand ee caasimadda Myanmar ee Yangon .
Ku soo noqoshada taariikhda dheer ee Myanmar sida awoodda bariiska ee koonfur bari Aasiya, Dagon Beer ayaa la dhoofiyaa bariis. Marka la barbardhigo beeraha yurub, bariisku waxay u muuqdaan kuwo fudud, qallafsan iyo wax yar, iyo Dagon Beer waa wax laga reebo!
Dalka Asalkiisa: Myanmar
Siren-Com / Wikimedia Commons
Sanadkan dahabiga ah wuxuu leeyahay ilaa 90% qaybta suuqa beerta ee dalka Filibiin , waana adag tahay in la ogaado sababta keentay: San Miguel Pale Pilsen waxaa laga soo saaray Manila tan iyo 1890kii, helitaanka saamiga suuqa sare ee Hong Kong.
Nooc buuxa leh oo leh qoraallo caramel ah iyo buug xusuus ah, San Miguel Pale Pilsen waxaa loola jeedaa in lagu ciyaaro cimilada diiran oo ay weheliso wejiga Filipino pulutan (saxan dhinaca) sida balka . Markaad dalbaneysid Filibiin, waxaad u sheegi kartaa waayeelka inuu kugu soo celiyo "cirro", oo kaliya "maqaarka", oo wuxuu ogaan doonaa waxa la sameeyo. (Akhri hagidkayaga si aan u cabbo Filibiin .)
Dalka Asalka: Filibiin
Yoji Shidara / Flickr / Creative Commons
Tiger hor-joog ah oo cabitaanka Singapore ah , Tiger Beer waxaa loo adeegaa meel kasta oo aad cunto u hesho - iyo cuisine-waalan-Singapore, taas oo meel walba , muddada. (In ka badan halkan: Toban sigaar ah waa inaad isku deysid Singapore .)
Maaha beerka ugu fiican ee jira, laakiin lafdhabarkooda, dhadhanka dhaadheer iyo qadhadhka qadhaadhka ah ayaa u muuqda inay koray suuqa suuqa. Marka Singapore, waxaan ku amrayaa haddii aysan jirin San Miguel hareeraha (markale mar dambe, hagahaaga ayaa qiray qadarin).
Tiger Beer ayaa lagu iibiyey astaanta "Waqtiga loogu talagalay Tiger" tan iyo markii ugu horeysay ee la soo saaro - qoraaga Anthony Burgess ayaa qaatay markii mugga koowaad ee Malayan Trilogy.
Dalka Asal: Singapore
Rabshadaynta Aasiyaanka: Waxyaabaha Laga Helo
Cities of Top Street Cuntooyinka Southeast Asia
Hagaha safarka ee Bohol, Philippines
8 Meelaha Aasiyada Koonfureed ee Aasiya Maaha Inaad Joojiso
Trekking ee Asia
Hagaha Kililka San Agustin, Intramuros, Philippines
Xagee laga daawan karaa Green Bay Packers ee Milwaukee
Saacadaha dukaamada ee Jarmalka
Badbaadada ugu fiican iyo Nudaha Nudaha ee Kariibiyaanka
Waxa la Yidhaahdo Baasaaboorkaaga waa Lumin ama La Xaday
Ammaanka & Caymiska
Christmas Iyadoo Hay'ada Qaranka ee UK
7 Wakaaladaha Wonder, Quirky, iyo Madxafyada Faransiiska ee Faransiiska
Noocyada Gaadiidka Dadweynaha ee Peru
Barkadaha Cozier ee Denver
Maalinta Shaqaalaha San Francisco
Newfoundland iyo Labrador oo jilicsan
Shakhsi ahaan ugu fiican Ireland
Turkiga ee Penis Rocks